၁၃ရက်ဖွား .. စနေသား.. ဗိသုကာ( ၂) | Layma's World
Filed under: Seasonal Post, That's what I wanna say |
« ကျောင်းပြေး ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ နေ့ …. »
nhn, on February 12, 2009 at 2:45 pm said:
အဲဒီစာအုပ် ဖတ်ချင်သား လေးမရေ…ကျွန်တော် မဖတ်ဖူးသေးဘူး ထင်တာပဲဗျာ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လဲ မတွေ့မိသေးဘူး။
သားကြွက်, on February 12, 2009 at 3:14 pm said:
မသိ တသိ သူတစ်ယောက်လာဖတ်သွားတယ်
စနေသား ဗိသုကာ တစ်ယောက်အကြောင်း
ကွာတယ် ကွာတယ် ခေတ်တွေက
မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ပါစေ ဆု နဲ့ မျက်နှာမြင် ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ချင်ပါစေ ဆု 😛
nu-san, on February 12, 2009 at 6:00 pm said:
ဗိသုကာသမားတစ်ယောက်အတွက်တော့ ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးကို ပြိုကွဲပျက်စီးတာမျိုး မဖြစ်ချင်ကြဘူး တတ်နိုင်သလောက် တည်မြဲအောင် ဆောက်မှာပဲ.. ဗိသုကာ အယောင်ဆောင်တွေကတော့ ဒီလိုမျိုး ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ..
စာအုပ်ကောင်းကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ..
ညိမ်းညို, on February 12, 2009 at 7:26 pm said:
စနေသား ဗိသုကာ ၂ အတွက် ၁နှစ်တိတိစောင့်နေကြောင်းပါဗျာ
တို့အစ်မကြီးလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကောင်းမှုနဲ့ အခုမှပဲ ကျောင်းပြန်တက်တော့တယ် 🙂
MhawSayar, on February 12, 2009 at 8:20 pm said:
၁၃ ရက်ဖွား စနေသား ဗိသုကာကြီးကို လာရောက် အလေးပြုသွားပါတယ်!
လွမ်းလုင်, on February 13, 2009 at 4:24 am said:
တက္ကသိုလ်နေဝင်းရေးတဲ့ ပြည်ထောင်စု ဗိသုကာ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က တကယ့်ကိုပဲ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းသွားချင်တာပါ။ အစ်မက ပြန်ရေးပြတော့ ထပ်ဖတ်ရတာပေါ့။ ကျေးဇူး အစ်မရေ…။ ကျောင်းပြေးတဲ့အစ်မကြီး ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှပဲ ကျောင်းပြန်တတ်တော့တယ်။ 😀 😛
Yan, on February 13, 2009 at 12:25 pm said:
ပို့စ်လေးက တိုပေမယ့် ထိမိစူးရှတယ်.
သတိတရနဲ့ ပို့စ်တင်ဖြစ်တဲ့အတွက် လေးမကို အရင်ကထက်ပိုပြီး လေးစားခင်မင်မိသွားတယ်.
ShwunMi, on February 14, 2009 at 12:40 pm said:
အရှေ့ကအစ်ကိုတွေ တောင်းဆိုသွားသလိုပဲ စာအုပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်လေ။
အဲ့ဒီဗိသုကာ ရောက်ရာဘ၀မှာ ၀မ်းမြောက်စေချင်တယ်။
အေးချမ်းသူ, on February 20, 2009 at 6:28 pm said:
စနေတွေကို စနေသားသမီး ဂြိုဟ်မွှေတယ်လို့ ပြောတတ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ညာဉ်လည်း ရှိတယ်လေ။ ကိုယ်တိုင်က စနေသားသမီးမို့လား… အဲဒါလေးကို ဂရုပြုမိနေတယ်။ ခု မမလေး တင်ပေးတဲ့ပို့စ်လေး၊ အရမ်းသဘောကျတယ်။